Horumarka Kufsiga ee Dumarka ee Bangkok - HGH Therapy ee Thailand
Hormarka koritaanka bini'aadamka ee ka horjeeda da'da qaangaarka ah. Natiijooyinka tijaabooyinka caafimaadka ee Thailand.
In 1999, Machadka Qaranka ee gudaha Thailand on gabowga ayaa daabacay mid ka mid ah daraasaddiisa muhiimka ah ee la xidhiidha wax ku oolnimada daaweynta beddelaadda isticmaalka hoormoonka koritaanka bani'aadamka (HGH). Ujeeddada daraasadani waxay ahayd ujeedo oo aaney kaliya isku dayin inay xaqiijiso waxtarka daaweynta hormoonka HGH, laakiin ay sameeyaan daraasad isku dheelitiran oo kor u qaadaya aqoonta caafimaadka ee la xidhiidha isticmaalka HGH ee ka hortagga gabowga. Ka qaybqaatayaashu waxay u qaybsan yihiin laba kooxood. Kooxda tijaabada ah waxay qaateen irbadaha HGH, halka kooxda kantaroolka ahi ay qaateen irbad cirbad.
Daraasad laba-indhoole ah HGH
Daraasadda dabiiciga ah waxay ahayd laban-indho, macnaheedu maaha dhakhaatiirta iyo bukaanka inay ogaadeen cirbadeynta HGH, laakiin cirbada ayaa ku durtay. Daraasadani waxay sidoo kale ahayd dhacdo qaran oo ay ka mid yihiin xarumaha caafimaadka ee laga soo galo dalka Thailand. Ka qaybqaatay tijaabooyinka, bukaanka iyo qaar ka mid ah astaamaha cilladda koritaanka hormoonka koritaanka. Koox walxaha daraasadda ah waxay ahaayeen kuwo aad u muhiim ah, waxayna awoodeen inay bixiyaan heerar badan oo kalsooni leh oo leh awoodda ay ku ogaan karaan xitaa heerarka hoose ee muhiimka ah.
Inkasta oo daraasaddan loo badalay daaweynta beddelka iyadoo la isticmaalayo hoormoonka koritaanka bini'aadamka, hadday lagama maarmaan tahay, bukaanku waxay sidoo kale heleen testosterone, progesterone iyo estrogen. Ujeedada daraasadani ma ahan oo kaliya inay muujiso faa'iidooyinka suurtagalka ah ee hoormoonka koritaanka iyo sida hormoonnada kale, sida testosterone, progesterone iyo estrogen. Waxay ahayd inay dhiirrigeliso sidoo kale awoodda daweynta ee HGH.
Dr. Thierry Hertoghe, ayaa daabacay daraasad cilmi baaris ah oo lagu beddelayo daaweynta beddelidda hormoonka HGH-ka si loogu daaweeyo bukaannada qaba hurgun hormoonka koritaanka qofka. Bukaannadani waxay lahaayeen noocyo kala duwan oo da 'wayn. Bukaanka ugu da'da yar wuxuu ahaa 27 sano jir iyo bukaanka ugu da'da weyn 82. Bilowga daraasaddan, Dr. Hertoghe iyo asxaabtiisu waxay si taxadar leh u diiwaangeliyeen xaaladda bukaanka oo dhan.
Ka dib markii ay diiwaangeliyeen xaaladda caafimaad ee bukaankooda, waxay sameeyeen hormoonka hormoonka HGH mudo laba bilood ah. Dr. Hertoghe waxaa laga heley bukaannadiisa wuxuuna ka codsaday inay buuxiyaan sahan ay ku jawaabeen saameynta daaweynta iyadoo la adeegsanayo su'aal ay ku sharaxday faa'iidooyinka ay ka heleen hormoonada hoormoonka koritaanka bani'aadamka. Waxyaabaha soo socda waa liiska dhammaan su'aalaha su'aal-sidaha iyo boqolkiiba bukaannada ka jawaabey tilmaamaya in xaaladdoodu ay hagaagtay.
Calaamadaha muuqaalka ee HGH yaraanta iyo gabowga
Tirada yar ee laalaabka ee wajiga - 75,5%
Nabaro waa mid ka mid ah calaamadaha ugu muuqda ee gabowga ah. Maqaarku wuxuu bilaabaa inuu lumiyo midabkiisa iyo buuxsamidana waxaa loo sameeyay qaababka fudud iyo qulqulka qoto dheer. Inta badan dadka bukaanka ah ee ka faa'iideystey hormoonnada hoormoonka hormoonka bini'aadamka, ayaa muujiyay in HGH ay jilcisay khadad ganaax ah ama waxay keentay in la waayay lafdhabarta. Cirbadaha hormoonada koritaanka bini'aadamka ayaa awood u leh in ay nuugaan unugyada maqaarka iyo hagaajinta xoogga muruqyada wajiga, labaduba waxay door ka ciyaarayaan luminta maqaarka.
Maqaarka haragga ee qoorta iyo wejiga - 67%
Murqaha adag ee xoogan waa 60.7%
In ka badan lix ka mid ah tobankii bukaan ah ayaa ka mid ahaa daraasadda Dr Hertoghe, muddo laba bilood ah oo ku saabsan irbadaha HGH, isbedelka murqaha. Hormarka kobaca bani-aadamka wuxuu awoodaa inuu kordho, sida muruqyada muruqa, iyo muruqa adigoo badalaya muuqaalka murqaha ee murqaha iyo xooggooda. Haddii bukaanku leeyahay heerar caafimaad qaba hormoon korriin ah, murqaha wuxuu helayaa tamar iyo shidaal sida qaabka koritaanka insulin-sida 1, taas oo hagaajineysa caafimaadka murqaha, gaar ahaan marka la isku daro jimicsiyo waxtar leh iyo cunto.
Heerka hoose ee dufanka jirka - 48%
Ku dhawaad ​​kalabar dadka bukaanka ah ee ka qaybqaatay daraasaddan sababtoo ah HGH irbadaha wuxuu bedelay jaantuska barta jirka. Hormarka kobaca bani-aadamka wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa dheef-shiid kiimikaad, taas oo si weyn u saameeysa muruqyada iyo daadinta dufanka xayawaanka ee jirka, laakiin gaar ahaan wareegga qaybta dhexe. Beerku wuxuu u beddelaa HGH ee IGF-1, wuxuuna awood u leeyahay inuu jebiyo nudaha dufanka aan caafimaadka qabin oo u rogo tamar dheeraad ah!
Dhuxul dhuuban oo adag, 34.5%
In ka badan seddex meelood oo ka mid ah jawaab bixiyayaashu waxay muujiyeen isbedel weyn oo ku yimid maqaarka maqaarka. Bukaanadaan waxay la kulmeen isbeddel ku yimid dhismaha maqaarka. Natiijadu waa murugada muruqyada iyo dheecaanka unugyada, kordhinta oo kaliya maqaarka iyo maqaarka maqaarku waxay u nugul yihiin in la baabi'iyo, hase yeeshee isbeddelladan jireed ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya kordhinta dabacsanaanta iyo mugga maqaarka. Unugyada maqaarka sida unugyada kale ee jirka ku jira waxay u baahan yihiin faleebo farsamaysan oo ku habboon. Unugyada maqaarku ma kala duwan yihiin. Farqiga ayaa ah in maqaarku yahay xubin si joogta ah u soo gaadhay cadaadiska dibadda, sida iftiinka qoraxda, heerkulka iyo dabaysha. Hormarka kobaca bini-aadanka wuxuu ka ilaalin karaa maqaallada ka soo horjeeda iyo ka hortagga fuuqbaxa, kaas oo ka caawiya maqaarka in uu sii joogteeyo, xooggan oo ka soo horjeeda dhibaatada.
Mugga xajmiga timaha - 28,1%
In ka badan rubuc ka mid ah ka qaybgalayaasha daraasaddan ayaa la kulmay isbeddel ku yimaada timahooda iyadoo ay sabab u tahay hormoonka koritaanka hormoonka bini'aadamka. Inkasta oo natiijada wanaagsani ay tahay tan ugu saraysa, qayb muhiim ah oo ka mid ah kuwa qaatay daaweynta HGH, waxay tixgeliyaan timaha caafimaadka qaba daaweyn. Marka unugyada maqaarku si habboon u fuuq-baxaan iyo dib-u-nooleyn, waxay sidoo kale kordhisaa caafimaadka timaha timaha. Qodobada timaha ayaa si fudud u ah unugyada maqaarka ee maqaarka ah si caafimaadka maqaarku uu sidoo kale door uga qaato caafimaadka timaha.
Fahamka iyo dareenka niyadjabka ah ee loo isticmaalo isticmaalka daaweynta hoormoonka, koritaanka bani'aadamka
Kordhinta guud ee isku dheelitirka dareenka - 71,4%
Ku dhowaad afar meelood saddex meelood oo bukaanno ah ayaa la kulmay xaalad nafsadeed oo guud. Kansarka hormoonka koritaanka hormoonka bini'aadamka mudo dheer waxay keentay hoos u dhaca caafimaadka maskaxda iyo natiijooyinka daraasaddan waxay bixisaa caddayn dheeraad ah oo ah in yaraanta hormoonka koritaanka bini'aadamku ka sii dari karto caafimaadka maskaxda. Bukaanjiif badan, HGH waxay awood u leedahay in ay nolol maalmeedkana u dulqaadato oo ku raaxaysato. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay isbeddelka is-qabsiga ee ka soo baxa isbeddel muuqaal ah oo ka dhacaya jirka, laakiin HGH sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu hagaajiyo kiimikada maskaxda!
Heerarka tamarta koraya - 86.8%
Bukaanka ka qaybgalaya daraasadda. Thierry, ku dhawaad ​​9 oo ka mid ah bukaanada 10 kasta waxay soo mareen heerarka korantada. Inta badan bukaanada qaba xanuunada, yaraanta HGH waxay muujineysaa daal. HGH wuxuu awoodaa inuu kiciyo jidhka, kaa caawinaya inaad u feejignaato oo aad u badan oo raba inuu qaato maalin. Hormoonka koritaanka bini'aadamka wuxuu awood u leeyahay arrintan sababo badan. Mid ka mid ah sababaha ayaa ah in ay kordhiso awoodda jireed ee lagu ogaanayo ugu dambeyntii dib-u-nooleynta sababtoo ah hurdada. Sabab kale ayaa ah in gumaysiga xayawaanka, IGF-1, uu keeno heerarka sare ee tamarta ee heerarka kiimikada.
Xooga jirka oo kordhay - 86,04%
Ka badan 85% ee jawaab bixiyayaasha ku jira tijaabada caafimaadka. Thierry ayaa soo warisay in natiijada HGH-ga ay kordhisay awoodda ay u leedahay inay ku qabato layliyo iyo shaqo jireed. Hormarka kobaca bani-aadamka wuxuu muujinayaa heerarka korodhka dheef-shiid kiimikaad ee keena murqaha tamarta. Kordhinta korantada waxay kor u qaaddaa awooda jidhka ee u adkeysiga heerarka korodhka dhaqdhaqaaqa jidhka marka lagu daro kororka isticmaalka shaqadan. Sidoo kale, hormoonka dib u bedelidda hormoonka HGH wuxuu kordhiyaa qiyaasta jirka uu soo kabsado ka dib jimicsi iyo dhaawac. Dib-u-soo-kabashada Waxqabadka sii kordhaya inta lagu jiro saacadaha hurdo macnaheedu waa in aad jimicsi kartid iyo badanaa adoon dareemin daal.
Adigu ma seexan kartid waqti dambe oo leh saameyn taban oo xun - 82,5%
Daweynta bedelka hormoonka kobcinta bini'aadamka wuxuu hagaajiyaa awoodda jirka si loo helo inta ugu badan ee hurdadiisa. HGH waa qarsoodi ugu horreyntii habeenkii waxaana tani dhacdaa marka jirku ka soo kabsado daal iyo xirashada, ilmo-yaqaanka maalintii oo dhan. Bukaanka qaba hargabka HGH, jidhku ma hayo waxtarka buuxa ee hurdada caafimaad qabta oo ugu danbeynna xanuunsado. Inkasta oo ay faa'iido badan tahay hurdada habeenkii sideed saacadood, bukaanka leh heerarka HGH oo caafimaad qaba, haddii loo baahdo, waxay si fiican u shaqeyn karaan hurdo yar. Waxaa intaa dheer, bukaannada qaba hurgun hurdada dhexdhexaad ah, HGH waxay gacan ka geysan kartaa dib u soo celinta caadooyinka hurdada leh ee caafimaad, dib u soo celinta qoyaanka dabiiciga ah ee jidhka.
Awoodda sii kordhaysa ee lagu xakameynayo walaaca - 83,7%
Waxaan sidoo kale ku talinaynaa in la akhriyo:
HGH oo miisaanka ku dhuftey Thailand Isticmaal hoormoonka koritaanka bini'aadanka ee dufanka lumiska ee Bangkok
Ku bilow dukaanka hadda!